Dogoggorri barreessuu galmee keessatti jala sarara diimaadhaan shoolama.Yoo jecha haala kanaan asxeeffame irra qaree keesse, buufata haallee tarree sirreeffamaa argachuuf banuu dandeessa.Sirreeffama filadhuutii jecha bakka buusi. Yeroo galmee gulaaltu ammas dogoggora wal fakkaata yoo uumte, ammas akka dogoggoraatti asxeeffama.
Jecha cimdii Gabatee ufmaan bakka buusaa keessaa bakkaa buusuuf, Baafata haallee ufmaan sirreessaa baniitii Ufmaan sirreessaa filadhu. Filannoo kee cita baafataa keessaa godhi. Jechi bakka bu'eetu aluma sanatti jechi cimdii gabatee bakka bu'iinsaa keessa kaawama.